आगोसंग पो खेल्न पुगेछु
कसरी म यहाँ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
जल्न पुगेछु ,
आगोसंग पो खेल्न पुगेछु ।
छन हात भरि
हृदय भरि छन
अनुहारमा लाग्छ कि
कालिमा र मोसो
धुँवा र खरानी ।
अन्धकार छ कि
भयो बिहानी ?
आँसु पनि पो
अब बग्न लागे ।
मलाई निल्न लागे ।
चुचुरा म चढ़न लागेँ ।
कहिले खोलाकै गड़तिर
गड़तिरै हिँड़न लागें ।
जता जान्छु उतै सुसेल्दै
राँकेभूत यी बाटो छेक्न लागे ।
पीड़ाको मुस्लो लिएर
किन ममाथि बर्षाउन लागे ?
कसरी यहाँ जल्न पुगेछु ।
HAMIHARU SANCHAIN NAI AAGO SANGHA PO KHELI RAHENKA CHAU